INDLU ESEMAPHANDLENI ESEMAPHANDLENI 2 BR - I-Airbnb
INDLU ESEMAPHANDLENI ESEMAPHANDLENI 2 BR
Chapmansboro, Tennessee, United States
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguSloane
Phumla kwindlu yakho esemaphandleni epholileyo ekwimizuzu eyi-5 kuphela ukuya kwisixeko sasePleasant View . Apho unokufumana iivenkile zokutya, iivenkile zokutyela, ukutya kwaseMexico, i-sushi yaseJapan, idinala yasekuhlaleni kunye neebhari kunye nezinto zokugrilla. Zonke zikumgama wemizuzu eyi-5 kuphela.
Ikude ngemizuzu eyi-30 ukusuka kwidolophu YASENASHVILLE !!! (Kude nezithuthi )
Le ndlu intle ikwi-acre enye, eyindawo emangalisayo yokubuka: Phola kwiveranda engaphambili, ube nendawo yokucingisisa phandle okanye iseshini ye-yoga, okanye uzipholele ebusuku phantsi kweenkwenkwezi xa kukho umlilo. Vuka ngekomityi yekofu ecocekileyo, uze ukhangele ifestile enkulu yasekhitshini ekufuya ukutya okumuncis 'iintupha. Le ndlu yabucala, ithule, kwaye inokuthula, kwaye ikwindlela esemva kwilizwe. Kuqukwe kwezi ndawo zintle kuvimba wecuba wakudala kunye nemithi yemephu eneminyaka eyi-100 ejikelezileyo.
Ngaphakathi, uza kufumana zonke izinto onokuzisebenzisa onokuzithanda nangaphezulu. Iibhedi ezinkulu ezitofotofo ezinamashiti acocekileyo ayi-100%. Igumbi ngalinye linokugcinwa okwaneleyo kwikhabhathi yakho yakudala. Igumbi lokuhlala linendawo yokuba zonke iindwendwe eziyi-4 ziphumle kamnandi, kwaye ikhitshi linefenitshala epheleleyo, kuquka iimbiza neepani, izinto zokupheka, kunye nomatshini wokwenza ikofu weKeurig. Nceda uze wonwabele le ndawo ipholileyo nebukeka kamnandi emaphandleni amahle.
4.92 · Izimvo eziyi-138
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi138
Izolile kakhulu, ithule kwaye ikhuselekile. Uza kuziva usekhaya apha. Ikufutshane kwimizuzu eyi-5 ukusuka kwisixeko sasePleasant View. Apho unokuzifumana khona zonke iimfuno zakho. Ukutya, ukutya nokunye!
Umbuki zindwendwe ngu- Sloane
Ndiza kudibana nawe xa ufika ndinezitshixo, kwaye ndiza kukuvumela ukuba ube wedwa endlini emva koko. Ukuba udinga nantoni na, nceda ungathandabuzi ukundifowunela okanye undibhalele umyalezo xa kukho izinto ozidingayo, nokuba inkulu okanye incinci kangakanani.
Ndiza kudibana nawe xa ufika ndinezitshixo, kwaye ndiza kukuvumela ukuba ube wedwa endlini emva koko. Ukuba udinga nantoni na, nceda ungathandabuzi ukundifowunela okanye undibhalel…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Chapmansboro